Indasitiri Yenhare Inopisa | Martech Zone
Mugovera, July 11, 2009 Svondo, Gunyana 29, 2013 Douglas Karr
Iyo indasitiri yemafoni iri kupisa chaizvo - uye kushambadzira nhare kune chokwadi chekutevera. Zvichida kuvandudza kwakanyanya kuve kugona kumhanyisa matatu maapplication.
Mari dzekutengesa nhare dzinotarisirwa kuwedzera kusvika pamadhora makumi maviri nemana emadhora pasi rese mu24, yakakwenenzverwa nehurongwa-hwedata rehurongwa uye kushambadzira-inotsigirwa nhare yekutsvaga, vhidhiyo nemitambo zvemitambo zvinoenderana nezvakafanotaurwa zvitsva zvakapihwa nekambani yekuongorora yemusika ABI Research. Kunobva: Vanotyisa Wireless kubva ABI Tsvagiridzo.
Yakatungamirwa neApple's iPhone ine pamusoro 1 bhiriyoni downloads mumwedzi 9, Blackberry, Verizon, Microsoft uye Android vane chokwadi chekutevera. Kugadziriswa kwepamusoro, kushandisika kukuru uye izere khibhodi kudzvanya pamafoni matsva ari kuvhura iyo indasitiri, pamwe neyekugadzirisa kumhanya uye ndangariro. Kunyangwe vatambi vekare pamusika vari kuzvarwa patsva… tarisa Nokia N97. (Ida iyo virusi kushambadza neLL Cool J, futi)
Kana iwe usingaoni vhidhiyo, pinda nepositi, Mobile Indasitiri Inodziya Kumusoro. Ini handifambirane neMobile sezvandinofanira… chaizvo chaizvo kupedza kudzidza kuBlackberry. Shamwari uye Mobile Marketing guru, Adam Mudiki, achange achinyora zvimwe zvinyorwa munguva pfupi Martech Zone uye ndiri kutarisira kwairi!
Tags: indasitiri yenharemobile marketing
Jul 14, 2009 pa 2: 43 AM
Yakakura posvo pane Mobile Indasitiri! Ndiri kutarisira kupa.